Xaflada Qalinjabinta Ciidanka Baambayda Oo Kadhacday Addisababa - Cakaara News
Xaflada Qalinjabinta Ciidanka Baambayda Oo Kadhacday Addisababa
Addisababa(CN)khamiis, 5ta November 2015, Waxaa maanta xaflad qalinjabin ah loo soo xidhay ciidan baambay ah oo mudo hal sano iyo 8bilood ah uxaraysanaa tababarka baambaynimada xarunta tababarada baambayda dalka ee kutaala Addis ababa iyagoo isugu jiray 50 baambayda ciidanka difaaca qaranka iyo 72 xubnood oo deegaanka soomaalida loo tababaray.
Xafladan oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxaa kasoo qayb galay mas'uuliyiin sare oo kasocotay dawlada dhexe ee federaalka iyo xukuumada DDSI oo ay kamid yihiin Wasiiru dawlaha wasaarada difaaca qaranka mudane Burhanu Abara, colonel Kibru Walde madaxa tababarada baambayda, madaxwayne kuxigeeenka ahna wasiirka horumarinta magaalooyinka, dhismaha iyo warshadaha mudane Cabdixakiin Cigaal Cumar, kuxigeenka xafiiska nabadgelyada, maamulka iyo cadaalada DDSI mudane Shugri Badal iyo kuxigeenka komishinka booliska DDSI gaashaanle dhexe Cali Ibraahin.
Waxaana ugu horayn xafladan kahadlay wasiiru dawlaha wasaarada difaaca qaranka mudane Burhanu Abara oo sheegay inay farxad utahay kasoo qaybgalka xafladan qalinjabinta baambayda oo markii ugu horaysay deegaanka soomaalida loo tababaro. Tanina ay tusaale u tahay kajawaabida iyo taakulaynta ay xukuumada dhexe had iyo jeer lagarab taagan tahay baahida deegaanada dalka. wuxuuna ugu hambalyeeyay qalinjabiyeyaasha samirka iyo adkaysiga u yeesheen xiligii tababarka oo ah ta guusha inay qalinjabiyaan ah keentay isagoo mahadnaq balaadhan halkaa uga soo jeediyay xukuumada DDSI, waalidiinta iyo eheladii qalinjabiyayaasha ee dadaalka ugalay inay baambay tiradaa dhan uqalinjabiso deegaanka. wuxuuna wasiiru dawluhu hadakiisii kusoo xidhay inay baambaydu kaalin kaqaadan doonaan dhanka iskuxidhka bulshada deegaanka.
Dhanka kalana, madaxwayne kuxigeenka ahna wasiirka horumarinta magaalooyinka, dhismaha iyo warshadaha mudane Cabdixakiin Cigaal Cumar oo kahadlay xafladan ayaa ugu horayn umahadceliyay dawlada federaalka ah oo hadh iyo habeenba taageero iyo taakulayn buuxda lagarab taagan deegaanka isagoo si gaar ahna ugu mahadnaqay ciidamada difaaca qaranka kaalinta lama ilaawaanka ah ee ay nabadgelyada deegaanka kuleeyihiin laga bilaabo salka oo ah tababarida ciidamada deegaanka ilaa naf uhurid difaacida shacabka deegaanka. wuxuuna ugu hambalyeeyay ardaydii qalinjabisay dadaalada ay muujiyeen xiligii ay tababarka kujireen. madaxwayne kuxigeenka ayaana xusay in ay qalinjabintan baambayda maanta ay tahay taariikhda markii ugu horaysay ee deegaanku abid yeesho baambay. Tanina ay calaamad u tahay horumarka deegaanku gaadhay. wuxuuna si qotodheer uqeexay muhiimada baambaydu leedahay oo ah inay wacyigalinta bulshada kaalin muuqda kuyeelan doonaan, inay door muhiim ah kuleeyihiin bilicda iyo quruxda magaalooyinka gaar ahaana dhanka munaasabadaha. madaxwayne kuxigeenka ayaana kula dardaarmay in qalinjabiyeyaashu ay si wadaniyad iyo xilkasnimo leh ugutaan waajibaadka saaran ee loo soo tababaray.
Ugudanbayna, waxaa xaflada hadal kooban kasoo jeediyay madaxa tababarada ciidanka baambayda mudane colonel kibru wolde oo u hambalyeeyay ardayda, xukuumada dhexe iyo ta deegaankaba.kadibna, waxaa halkaa lagu abaalmariyay ardayda kaalmaha hore kagashay tababarka gaar ahaan dhanka anshaxa, fahanka, dabeecada iyo dulqaadka.